भाग्य परिवर्तन हुनका लागि छोरी नै जन्मिनु पर्दछ : ज्योतिष ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > भाग्य परिवर्तन हुनका लागि छोरी नै जन्मिनु पर्दछ : ज्योतिष !
admin December 17, 2020 December 17, 2020 जीवनशैली, समाज	0
स्त्री हरुकाे स्वभाव र पुरुषहरुको भाग्य स्वयम् भगवान् लाई पनि थाहा हुदैन कहिले र कहाँ गएर परिवर्तन हुन्छ भनेर । मनिसकाे भाग्य तीन तरिकाबाट परिवर्तन हुन्छ भनेर ज्याेतिष तथा वस्तुशास्त्रका ठूलाठूला ग्रन्थ हरुमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
मान्छेकाे इच्छा अनुसार काम गर्ने बिरुवा लक्की बेम्बो, कुन दिशामा राख्ने ? एउटै महिनामा दुई पटक मङ्गल चौथी व्रत नयाँ व्रत बस्ने हरुका लागि अति उपयुक्त समय । भाग्य र कर्मका साथै वास्तुशास्त्रमा पनि ध्यान दिदाँ सफलता हात पर्छ ।
घर बनाएर नयाँ घरमा सर्दा खेरि त्यस्तै विवाह गरिसकेपछि र सन्तान जन्मेपछि मानिसको भाग्य परिवर्तन हुनेकुरा ज्याेतिषीहरुले जानकारी गराएका छन । कसैका राम्राे हुन्छ भने राम्राे हुने हरुकाे लागि सन्तान गर्भमा आएदेखि नराम्राे तथा धन सम्पत्ति नाेक्सान गर्ने तरिकाले आउने गर्छन् । शुभ तथा अशुभ भन्ने कुरा समयले जानकारी गराउने हाे ।
जसकाे तेस्राे नेत्र यानि दाहिने दिमाग चल्छ तेस्ता मानिस हरुका लागि कुनैपनि कुरा असम्भव भन्ने हुदैन । आम मानिसकाे दाहिने दिमागकाे प्रयाेग एकदमै कम हुने गर्दछ जसकाे दाहिने दिमाग चल्छ तेस्ता मानिसहरू धेरै ने शक्तिशाली हुने गर्दछन । पुरुषको तुलनामा महिलाको दाहिने दिमाग केही धेरै चल्ने कुरा जानकार हरु बताउदै आएका छन ।
दाहिने दिमागदे निर्णय गर्ने गर्छ भने बायाँ दिमागले साेच्नेकाम मात्रै गर्ने गर्दछ । राम्राे समयमा निर्णय लिनु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । रिजाल दक्षिण एसियाली ज्याेतिष महासंघ नेपालका महासचिव हुन ।
पापिनी आमा! संसारले भगवान सरह पुज्ने आमाले नै कसरी मारिन होला आफ्नै ४ बर्षिय छोरी?
नेपालकाे गाउँमै आयो अनौठो रोग, ५ जनाको भटाभट निधन